China Noise Control Custom Custom Logo low moq hazie casque earphone ANC 808 ekweisi ekwe ikuku Bluetooth na Igwe okwu arụpụta na ụlọ ọrụ | Yong Fang
Ọrụ Noise Control Custom Mere Logo ala moq hazie casque ntị ntị ANC 808 ekweisi ekwe ikuku Bluetooth na Igwe okwu
Nha ngwaahịa: 175 (L) * 80 (W) * 200 (H) MM;
Ngwọta Bluetooth: BK 3266 V5.0
ANC Ngwọta: LM5896
Nkọwapụta nkwado A2DP / AVRCP / HFP
Ngwa ọkwọ ụgbọala: 40mm, 32ohm;
Nzaghachi ugboro ugboro: 20Hz-20KHz;
Onyinye ike: 3.7V, 400mAh Batrị Lithium;
Nweta ike: 35mW;
Mbelata mkpọtụ mkpọtụ ugboro ugboro: 40-600Hz;
Oke mkpọtụ mkpọtụ kachasị: 20 +/- 2dB;
Noise Mbelata etiti etiti: gburugburu 100Hz-300Hz;
Distancerụ ọrụ dị anya: 10Mita;
Oge ọrụ: ruo 10hours;
Aha ngwaahịa ： ANC-808
No Noise nọ n'ọrụ ịkagbu ruo 18-22dB】Igwe okwu ANC a nwere ike ịchọpụta mkpọtụ gburugburu ebe obibi site na sistemụ nkagbu nọ n'ọrụ nke etinyere n'ime igwe okwu. Emere ya na teknụzụ Feed Forward ANC. Mbelata mkpọtụ ụda sitere na 18 dB ruo 22 dB. Yabụ, mgbe anyị nọ n'ụgbọ elu, ụgbọ oloko, metro, ma ọ bụ na-aga n'okporo ámá ọha ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa, isi okwu ANC a nwere ike ịkagbu mkpọtụ ahụ ma mepụta ụwa dị mma;
40mm neodymium ike bass ọkwọ ụgbọala】A na-ahazi ndị ọkà okwu maka isi okwu a dabere na usoro ụlọ obibi nke ANC na-akwado. Ọ mụta nwa super ike bass na kristal doro anya ụda. Ọ bụrụ na anyị agbanye ọrụ ANC, ntị ma ọ bụ nkwukọrịta ga-adị ịtụnanya;
Just Kemeghi Collapsible & Light arọ Design】A na-eme ka isi mkpọtụ mkpọtụ a dabara adaba maka nha isi nke ndị ọrụ dị iche iche. Na, na earpieces nwere ike apịaji n'ime, a collapsible Ọdịdị engineering imewe ka a wireless ekweisi nwere ike apịaji n'ime a nnọọ obere nha. Igweisi na-eji ihe plastik na-adịchaghị mma na ihe eji akpụkpọ anụ mara mma. Site n'ime nke a, isi igwe na-enweghị eriri dị fechaa;
【Nọgide Na-arụ Ọrụ Awa 12 Na-enweghị】Enwere batrị lithium 400mAh na-akwụ ụgwọ n'ime isi okwu. Nọmalị, ọ nwere ike ịrụ ọrụ awa 12 na-enweghị nkwụsị. Ọ bụrụ na ịgbanwee ọrụ ANC, ọ nwere ike ịrụ ọrụ elekere 10 na-enweghị nkwụsị.
Ezubere 3.5mm Aux Na Socket】enwere ike iji ekweisi ikuku dị ka eriri isi. Ọ e mere na a ọkọlọtọ eluigwe na ala 3.5mm audio anya. Ma, enwere mgbakwunye 3.5mm na 3.5mm dị ka ngwa ya. Yabụ, igwe ikuku Bluetooth a na-enweghị eriri nwere ike ịrụ ọrụ dị ka wired nkịtị zuru ụwa ọnụ.
Ngwa ngwa ngwa mgbakwunye & Extra Options】Maka ekweisi a, ọkọlọtọ ọkọlọtọ ga-abụ ndu ọsọ ọsọ, eriri na-ebugharị ike, eriri igwe, yana ngwa nhọrọ ga-abụ obere obere obere na okwu ọhụụ EVA. Ebe ọ bụ na ekweisi igwe ikuku a na-ada ada, ọ bụrụ na ejiri obere akpa ahaziri ma ọ bụ ikpe eva ahaziri, ọ ga-adịrị anyị mfe iburu ya ebe ọ bụla anyị na-aga.
Nke gara aga: Ejiji Ejiji Tws Earphone Factory Kpọmkwem Sale Ezi Ikuku stereo Earbuds na Aka Control
Isi mmiri Ikuku na-enweghị mmiri
Ikuku ekweisi maka gam akporo
Ikuku ekweisi maka Tv
Ikuku ekweisi na Mic
Ikuku na Ntị ekweisi
OEM Omenala Logo ANC Nnukwu Uda High Quality Low ...